लुकेर अभिकर्ता बन्दै श्रीमानलाई सरप्राईज दिएकी समिता बीमा व्यवसाय फैलाउँदै - Beemapost.com
२९ चैत्र २०७८, मंगलवार १३:२२
काठमाडौं । नेपाली समाजमा पुरुषको तुलनामा महिलालाई थोरै मात्रै स्थान दिइन्छ, चाहे ठुलो निर्णय वा साना नै किन नहोस् ।नेपाली समाजमा महिलाहरु घरधन्दा मै रहनुपर्छ भन्ने मान्यतामा आजभोलि पनि केही फरक नआएको समिता दराई बताँउछिन् ।
श्रीमान निजामति कर्मचारी, के नै कमि थियो र ? तर, उनको सोच जहिले त्यहि हुन्थ्यो, म अरु भन्दा केही भिन्नै हुन्छु, म श्रीमानको कमाईमा मात्रै निर्भर नभई आत्मनिर्भर हुन्छु । यस्तै विचारहरु उनको मनमा आईरह्न्थ्यो ।
उनको यस्तो सोचलाई पूरा गरिदियो रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले । मनमा स्वतन्त्र पेशा अपनाउने मनसाय लिएर हिडेकी चितवन भरतपुरकी समिता दराईले पाईन् जीवन बीमा अभिकर्ता पेशा । जुन पेशा उनले सोचे जस्तै आफैले समय मिलाएर काम गर्न पाउने, आम्दानीको कुनै सीमा थिएन । औसतभन्दा माथि काम गर्ने मानिसहरु यस्तै पेशालाई रुचाउँछन् भन्ने मान्यतालाई सत्य सावित गर्दै समिता पनि अब यही पेशामा जम्ने, रम्ने अनि कमाउने निधो गरिन् ।
घर गृहस्थी समालिरहेकी उनीमा बाख्रा फर्म खोलेर केही गरौंकी भन्ने सोच पनि नआएको भने होइन । त्यसको लागि पुँजि चाहियो, पौरख पनि निकै नै गर्नुपर्ने भयो । यस्तै खालका धेरै विकल्पहरु उनका अगाडि आए । व्यवसाय गर्ने वा जागिर खाने की के गर्ने ? घर परिवारलाई पनि समय दिनुपर्ने बाध्यताले जे सुकै काम गर्न खोजेपनि उनका लागि तगारो बनेर उभिन्थ्यो ।
समिताले श्रीमानसँग बीमा अभिकर्ता पेशामा लाग्न सल्लाह पनि नमागेकी पनि होइनन् । तर, श्रीमान्ले तिमीले सक्दिनौं, यो पेशामा निरन्तरता दिन सक्दिनौं त्यसैले हुँदैन होला भन्ने जवाफ पाईन् । गर्ने तर के सक्छु र भन्ने पनि प्रश्न चिन्ह्र खडा भएको थियो उनको मनमा ।
अनि उनले आफैले आफैलाई मूल्याङ्कन गर्न थालिन् । बीमा अभिकर्ता भएर काम गर्न सक्ने हैसियत र क्षमता ममा पनि बुझिन् । आफूले आफूलाई विश्वास गरेर नै जीवनमा सफलताको शिखरमा पुग्न सक्छु भन्ने दुढ विश्वास पनि उनले विकास गरिन् ।
श्रीमान्बाट बीमा अभिकर्ता पेशामा लाग भन्ने हैसला नपाईसकेपछि उनले लुकी लुकी भएपनि कोड निकालेर काम गर्न लागिन् । उनले धेरै न्यून आय भएका तथा महिलाहरुलाई बीमा गराउन भरमग्दुर मेहनत गरिन् । त्यसले एकातिर न्यून आय भएका तथा महिलाहरुको जीवनको जोखिम रक्षावरण गर्दथ्यो भने अर्कोतफ आफूलाई केही आम्दानी हुन्थ्यो ।
‘निजामति कर्मचारीको काम गर्ने समय १० देखि ५ बजेसम्म हुन्थ्यो । म घरको सबै काम सकेर आफू पनि निस्किएँ’, समिताले भनिन् । ‘श्रीमान् घर आउनु अगाडि नै काम सकेर आउथ्यो ।
यसरी नै मैले बीमा अभिकर्ताको पेशालाई निरन्तरता दिइरहे ।’ चुलो चौका मै थन्किएर रहेकी समिता अब एउटी कर्मचारीको रुपमा चिनिईन् ।तर कति दिन यसरी काम गर्ने भनेर श्रीमान्लाई आफूले कमाएको पैसाको बारेमा जानकारी दिइसकेपछि उनले पनि अहिले पूर्ण रुपमा मलाई साथ दिइरहनुभएको छ । अहिलो मलाई बीमा गर्नको लागि बीमित पनि खोजिदिनुहुन्छ । परिवारको सहयोगले निकै छु, उनी भन्छिन् ।
२०७७ सालको चैत महिनामा रिलायबल नेपाल लाइफको सिनियर एजेन्सी म्यानेनजर तारा माया कुमालले उनलाई बीमा अभिकर्ता बन्ने सल्लाहा दिएकी थिईन् ।
उनकै सल्लाहमा समिताले बीमा अभिकर्ता पेशालाई रोज्न पुगिन् समिता । बीमा अभिकर्ता पेशाको इजाजत पत्र लिएर काम सुरु गरेको आज दुई बर्ष भईसकेको छ । उनी एमडिआरटी पनि भईसकेकी छिन् ।
बीमा अभिकर्ताको लाइसेन्स लिएपछि उनले शुरुको बीमा आफ्नै आफन्त, छरछिमेकको गर्न थालिन् । आफन्त अनि छरछिमेकले आफ्नो बीमा प्रस्ताव सहजै स्वीकार गरेपछि उनमा यो पेशा मै केही गर्छु भन्ने भावना जागेको थियो ।
साँच्चै नै बीमा अभिकर्ता पेशा उनको लागि जीवनको अमूल्य पेशा भइ दियो । समिता यही पेशामा आए पछि आफ्ना आवाजहरु खुलस्त पोख्न सक्ने भईन् । बीमा अभिकर्तामा काम गर्दै जाँदा सुरु सुरुमा मासिक १०-२० हजार सम्म कमाउन सफल भईन्, जुन उनको लागि जीवनको पहिलो कमाई थियो ।
जो कोही पनि आर्थिक रुपमा सक्षम हुँदा व्यक्तित्व विकास पनि हुने उनको भोगाई छ । बीमा क्षेत्र मै आएर उनले बल्ल यो कुराको महशुस गर्न पाईन् । आर्थिक रुपमा सबल भए पछि आफुमा आत्मबलको सृजना हुने र अरु कसैलाई सानोतिनो खर्चको लागि हात फैलाउन नपर्ने उनको भोगाई छ ।
अहिले उनले मनग्य आम्दानी गर्न थालेपछि घर परिवारका सबै जना खुशी बनेका छन् भने आफूले चाहेको खर्चले आफैले जोहो गर्न पाउँदा मनभित्रैदेखि फुरुंग हुने गरेको उनको अनुभव छ ।
“बीमा क्षेत्रमा आउनु पूर्व घरभित्र मात्र सीमित थिए, त्यो मेरो बाध्यता थियो । अहिले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने मौका पाएकी छु । स्वतन्त्रतको वातावरणमा रम्न पाएकी छु । यही पेशा अगाले पछि मैले स्वतन्त्रताको अनुभव गर्न पाए ।” उनले आफ्नो अनुभव साटिन् । आज यही पेशाले गर्दा समिता हजारौँ मानिसहरुका अगाडि उभिएर बोल्न सक्ने भएकी छिन् । सबै सामु निडर भएर बोल्न सक्ने क्षमता बीमाले प्रदान गरेको उनको अनुभव छ ।
अभिकर्ता पेशामै आए पछि उनको परिचय फेरिएको छ । उनलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा फरकपन आएको छ । दुई वर्षदेखि अभिकर्ता पेशामा जोडिएकी समिता अभिकर्ता पेशालाई स्वतन्त्र पेशाका रुपमा लिन्छिन् ।
“यो क्षेत्र भनेको अरुले भनसुन लाएर प्रगति गर्नु वा नातावादको कृपाले भन्दा पनि आफ्नै संघर्षले अघि बढ्ने क्षेत्र हो । उनले आफ्नो पेशाबारे गर्वका साथ भनिन् ।”अभिकर्ता पेशालाई सामाजिक पेशा, सेवकको रुपमा हेर्ने उनी भन्छिन्, सहयोगको भावनामा काम गर्ने मान्छे अभिकर्ता हो, सेवक हो उनले भनिन् ।
कसैको पनि कुभलो नसोच्ने, असल, इमान्दार, आफ्नो फाइदा भन्दा पनि अरुको फाइदा होस् भन्ने भावना असल बीमा अभिकर्ता पेशामा हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।
एउटा सफल बीमा अभिकर्तामा विभिन्न खालका गुणहरु हुनुपर्ने तर्क उनको छ । अभिकर्ता आफ्नो पेशाप्रति लगनशिल र निरन्तर रुपमा लागि पर्नुपर्ने भएर समिताको अनुभव छ । निरन्तर रुपमा लागि पर्ने जो कोही पनि यो पेशामा सफल हुन सक्ने अनुभव छ उनीमा छ ।
अभिकर्तामा धैर्यता हुनुपर्ने समिताले बताईन । मेहनती, इमान्दार, सहनशीलता, धैर्यता, बीमा बुझाउन सक्ने गुणहरु मुख्य रुपमा बीमा अभिकर्तामा हुनुपर्ने उनको भोगाई छ ।एउटा असल बीमा अभिकर्तामा धेरै गुणहरु हुनुपर्ने उनको तर्क छ । मेहनती, इमान्दार, सहनशीलता, धैर्यता, लगनशीलता लगायतका गुणहरु मुख्य रुपमा बीमा अभिकर्तामा हुनुपर्ने समिताको धारणा छ ।
मानिसले जीवन पाउने सफलताको कुनै सीमा हुँदैन । सफलता जति पनि पाउन सकिन्छ । सफलतालाई के र कतिलाई मान्ने यसको कुनै सीमा हुँदैन ।
नव प्रवेशीहरुले बीमाको आधारभूत सिद्धान्तहरु बुझेर जीवन बीमा व्यवसायमा पौरख गर्नेहरु भोको नहुने र जीवन जगत बुझेर सफल मानवको रुपमा जीवन यापन गर्न सहज हुने समिताको बुझाई छ । उनले जीवन बीमा भविष्यको लागि सुरक्षा भएकोले आज गाली नै गरेपनि बीमाबाट लाभ पाएको दिन हृदयदेखि नै प्रसंशा खान पाइने भएकोले यही पेशामा जीवन समर्पित गर्ने बताउँछिन् ।